राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल | eAdarsha.com
१.राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले उनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो भने काङ्ग्रेसले उनको विरोधमा कुमारी लक्ष्मी राईलाई प्रत्याशी बनाएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ पनि भएको छ। पहिलो कार्यकालले खारिएकी उनको दोस्रो कार्यकाल अरु राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२. उनी विद्यार्थी अवस्थादेखि नै राजनीतिमा लागेकी थिइन्। उनको नाम त्यसबेला चम्क्यो, जब उनले आफ्ना पति सांसद मदन भण्डारीको मोटर दुर्घटनामा निधन भएपछि खालि भएको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारीका लागि मनोनयन पत्र दाखिल गरिन्। त्यो उनको खुल्ला राजनीतिमा मैदानमा उत्रेको शुरुआत थियो।
३. त्यो निर्वाचनमा उनले नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेकी थिइन्। उनको त्यो विजय देश विदेशमा चर्चित रह्यो। त्यस बेलादेखि उनी निरन्तर अघि बढिरहेकी छिन्। उनी पार्टीको चुनावमा पनि एकपछि अर्को खुड्किलो चढ्दै पार्टीको उपाध्यक्ष समेत बनेकी थिइन्। उनी रक्षामन्त्री पनि भएकी छिन्। कुनै पनि महिला रक्षामन्त्री भएको त्यो पहिलो पटक हो।
४. एकपछि अर्को रिर्कर्ड राख्दै अघि बढ्ने क्रममा पहिलो महिला राष्ट्रपति पनि भइन्। त्यही बेला सवोर्च्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भएकी थिइन् भने प्रतिनिधि सभाको सभामुख ओमसरी र्घर्ती भएकी थिइन्। देशको शीर्ष तीन पदमा तीन जना महिला आसीन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै लागि चर्चाको विषय भएको थियो।
५. उनको पहिलो कार्यकाल सामान्य अवस्थामा बित्दै थियो। तर पछि उनले सरकारले सिफारिस गरि पठाएको राष्ट्रिय सभाको गठन विधिको विधेयक दुर्इ महिनासम्म प्रमाणीकरण नगरी त्यसै राखेपछि, त्यो विवादको विषय भयो। त्यसले गर्दा एकातिर राष्ट्रिय सभाको चुनाव ढिलो हुन गयो भने अकोर्तिर सत्ता हस्तान्तरण कार्यले पनि लामो समय लियो।
६. त्यस्तै उनको अर्को विवादास्पद काम भनेको देउवा सरकारले सफारिस गरेको राष्ट्रिय सभाका तीन जना सदस्यहरुलाई तुरुन्त मनोनित नगरी राख्नु हो। उनले तुरुन्त मनोनित नगरी राखेकीले ओली सरकारले ती तीन जना सदस्यहरु फेर्ने अवसर पायो। राष्ट्रपतिका ती कार्यहरु दूरगामी महत्वका छन् र नजिरका रुपमा रहने सम्भावना छ।
७. उनका तीनै विवादास्पद कारणहरुले गर्दा काङ्ग्रेसले उनको विरोधमा प्रत्याशी खडा गरेको प्रष्ट पारेको छ। राष्ट्रपतिले सामान्यतया सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउने हो। सरकारलाई बाधा अवरोध पुर्‍याए भने त्यसले अनावश्यक विवाद निम्त्याउँछ। राष्ट्रपति विवादास्पद बन्नु हुँदैन। विवाददेखि पर रहनु त्यसको विशेषता हो। राष्ट्रपति जति विवाददेखि पर रहन्छ उति त्यसको सफलता निहित हुन्छ। विद्या भण्डारीको यो दोस्रो कार्यकाल भएकोले आगामी उनको कार्यकाल विवाद रहित किसिमले निष्कलङ्क रुपमा बित्नु पर्दछ। हामी उनको सफलताको कामना गर्दछौँ।